CORNACHOWER, MEADOW: SHARAX, SAWIR, BOGSIINTA GURYAHA IYO ISTICMAALKA - DAAWADA DADWEYNAHA
Cornflower waa marti aan loo jecleyn beeraha iyo beeraha, halkaas oo ay la halgamaan, sida mid kasta oo weed. Laakiin waqti isku mid ah ubaxkan cawska ah wuxuu u adeegaa ilaha alaabta ceeriin ee daawada dhaqameed, waxaana sidoo kale loo isticmaalaa meelo kale.
Noocyada Cornflower (Centauréa jácea) waa geedo digaag ah oo ka mid ah caleenta Cornflowers, oo ah qayb ka mid ah qoyska Astera (magac kale - Compositae). Maqaalka, mararka qaarkood wuxuu gaaraa 1 m dhererka, laamood ee qaybta sare, dusha sare ee laamiyada waxaa lagu tiriyaa llorescences. Caleemuhu waa cidhiidhi, dheeraan, lacag muuqaal ah sababtoo ah xaqiiqda ah inay ku daboolan yihiin timaha ugu yar. Ubaxa waxaa lagu ururiyaa inflorescences qaab ka mid ah dambiisha midabka lilac-pink ama lilac-purple.
Qiimaha gaar ahaaneed waa kuwa ubaxyada guriga ah ee faa'iido u leh caafimaadka aadanaha, sida: Chlorophytum, Aloe, Geranium, Laurus, Kalanchoe, Cactus.
Ubaxa waxaa loo qaybiyaa ku dhawaad ​​Yurub iyo Siberia. Waxaa badanaa laga helaa meelaha kaynta ku yaal, dhinaca dhinaca waddada, cawska. Dhamaan fasaxyada xagaaga, iyo tijaabooyinka qaar - ilaa Oktoobar.
Ma taqaanaa? Magaca Laatiin ee caanjoogta (Cornaurus) (Centauréa) waxaa soo jeediyay dhaliilaha dabiiciga ah ee qarnigii XVIII, Carl Linnaeus. Waxaa laga soo qaatay ereyga luuqada Latin "centaureus" - "tixraacaya calaamadaha". Sida laga soo xigtay halyeeyadii hore ee Giriigga, iyadoo gacan ka heleysa ubaxkan, centaur Chiron wuxuu bogsiiyay nabarka uu sababay fallaadh sumaysan.
Si tartiib ah, inkastoo ay baahsan yihiin baahsanaanta ubaxyada duurjoogta leh, ka kooban kiimikada ayaa weli aan si buuxda loo darsin. Waxaa la og yahay in dhirta ay ku jiraan fareerka, xantho-glycoside centaurine iyo ascorbic acid, iyo miraha waxaa ku jira saliid lagama maarmaan ah.
In daawada dad, ubax this dufan ayaa laga helay codsi aad u ballaaran. Maandooriyeyaasha ka sameysma waxaa ka mid ah duriinka, choleretic, xanuunka, faleebo anti-bararka iyo firfircoonaanta. Waxaa loo adeegsadaa cudurada wadnaha, xanuunka caloosha, madax xanuun, cagaarshow, qufac, cudurada kalyaha.
Kaadiinka, xajka, xayawaanka, xakamaynta, soodhada, qandhicilka, qandhicilka, lafa-beelka, celandine, plerantrantus, iyo chokeberry madow sidoo kale waxay leeyihiin saameyn ku-daaweynta duriinka.
Sida loo isticmaalo warshadda
Si loo abuuro daawooyinka daaweynta dhammaan qaybaha dhirta waxaa loo isticmaalaa - jirridaha, caleemaha, inflorescences, xididdada. Waxay samaystaan ​​fedraal, quraacda dhirta, waa la soo dhejiyey oo caadka, loo isticmaalay qaab qalalan. Maaddada kondhomolojiga, halkaas oo qorraxdu dhirtu ay sidoo kale ka heshay isticmaalka, waxaa loo isticmaalaa qeyb ka mid ah maaskarada la isku qurxiyo, iyo fusho - sida kareemka. Hoos waxaa ku qoran sharaxaad ka mid ah daaweynta qurxinta iyo daaweynta daaweynta ee ku salaysan.
Murgayaasha iyo lafaha ee lafaha, poultices ka soo gooyay qayb ka mid ah gabbaldayaha waxaa loo isticmaalaa. Dhirta la goostay, waxay doorbidaan in la goosto, waxaa lagu daaweeyaa biyo karkaraya, lagu duudduubay faashad, iyo poultice kulul la soo saaray ayaa lagu dabaqayaa ilaha raaxada. Cudurka wadnaha, kalyaha iyo cudurrada catarrhal, faleebo ayaa loo isticmaalaa. Waxaa si fudud loo sameeyaa: 2 qaado oo ka mid ah warshad qalalan ayaa lagu shubay galaas biyo la karkariyey, waxay u taagan yihiin laba saacadood oo daadi. Daroogada keentay waxaa loo qaadaa qiyaasta saddex jeer maalintii dhowr miridh ka hor cuntada ka hor.
Waa muhiim! Marka la eego daraasad aan fiicneyn oo ku saabsan sifooyinka dawooyinka ee barafka, waa inaad la tashatid khubaro kahor intaadan isticmaalin mukhaadaraadka ku salaysan. Waxaa hubaal ah in aan lagugula talin in aad isticmaasho daawooyinka noocan oo kale ah haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya, iyo sidoo kale carruurta.
Marka shubanku ka caawiyo faleebo qoyan oo qalalan. Waxaa la mid ah midkii hore: 2 qaado oo biyo ah oo karkaraya, 2 saacadood oo faleebo ah iyo ceejin. Waxaa la aqbalaa isla markaa isla cunno intaadan cunin cuntada.
Maaskarada wajiga miisaanka ayaa leh saameyn togan oo ku saabsan maqaarka. Wixii soo saarista ee qaadatay 3 qaado oo ubax la qalajiyey iyo ku shubay 100 ml oo biyo nadiifa, qaboojiyey + 80-90 ° C. Awoodda leh ubaxyo la daboolay oo daboolaya si ay u qaboojiyaan. Ka dib qaboojinta, faleebo this waxaa lagu qasay 50 g oo malab ah dareere ah. Maaskarada waxaa loo isticmaalaa in la nadiifiyo maqaarka iyo da'da 20 daqiiqo. Faleebo qoyan oo loo isticmaalo sida looska. Wixii cunto karinta u baahan yahay 2 qaado oo ubax ah oo la qalajiyey. Waxay ku shubeen galaas biyo yar oo la qaboojiyey, daboolka daboolka ah ilaa daboolka si buuxda loo qaboojiyo oo la sifeeyo. Sumoobka soo baxa waxaa loo isticmaalaa sida kareemka jirka ee joogtada ah. Waxaa loo isticmaalaa maqaarka 1 jeer maalintii. Waxaad sidoo kale xakameyn kartaa faleebada ku jirta godadka. Natiijada waxaa loogu yeeraa baraf cad, oo sidoo kale loo isticmaalo qashinka maqaarka maalin kasta.
Waa muhiim! Caleenta buluugta leh ee looxa dhejis ah ayaa loo isticmaalaa oo keliya maqaarka oilyada oo u nugul dheecaanka lipid.
Faleebo dhirta qorraxdu ka baxdo ayaa sidoo kale loo isticmaalaa sidii looga takhalusi lahaa bararka iyo casaanka indhaha. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaashaa qaado ah ubaxyo la qalajiyey oo ku jira galaas biyo ah la karkariyey, la qaboojiyey +90 ° C Ka dib qaboojinta, faleebo si heerkulka qolka, waxaa lagu daboolaa indhaha daboolka suufka. Nidaamku wuxuu qaadanayaa 20 daqiiqo.
Marka laga soo tago codsiyada daweynta iyo cosmetological, dhirta qoyan dhirta waxaa loo yaqaanaa warshad malab wanaagsan. Iyadoo waxsoosaar ah, ayuu, dabcan, wuxuu u muuqdaa mid caan ah oo ka soo horjeeda asalka jaangooyooyinka sida "acacia" ama "linden", laakiin wuxuu laaluush siinayaa mudo dheer. Wax soo saarkeeda waxaa lagu qiyaasaa 100-130 kg halkii hektar marka la eego arrimo adag oo ka timid ubax.
Ma taqaanaa? Marka caleemaha iyo afkoda geedka this helay rinji huruud ah.
Geedka ayaa sidoo kale tagaa si uu u quudiyo xoolaha. Intaa waxaa dheer, mararka qaarkood waxaa loo isticmaalaa naqshad sameynta sariiraha ubaxa iyo sariiraha ubaxa.
Ururinta iyo diyaarinta alaabta ceeriin ee caafimaadka
Cawska iyo ubaxa qorraxda qorraxdu waa la goostay inta lagu jiro mudada oo dhan ubaxeeda. Uruurinta xididada la soo saaro dayrta. Labada dhirta cusub ee la goostay oo la qalajiyey ayaa loo isticmaalaa ujeedooyin daaweyn. Ururinta ayaa la qalajiyey meel bannaan leh ama qol hawo leh, taas oo aan lagu dhex gelin qorraxda tooska ah. Xaaladdan, ururinta waa in si joogto ah loo soo jeesto. Si loo dedejiyo geedi socodka, waxaad isticmaali kartaa qallajiye khaas ah. Xaaladdan, ururinta waa la qalajiyey heerkul ah + 40-50 ° C. Cuntada la kariyey waxaa lagu kaydiyaa weel daboolan oo xidhan ama sanduuq. Nafaqada - ilaa 2 sano.
Sidaa daraadeed, qorraxdhicii qorraxdu ma aha oo keliya ilaha cuntooyinka ceyriinka ah, laakiin sidoo kale wuxuu raadiyaa codsiga kondomoolka iyo shinnida. Intaa waxaa dheer, ubaxyo caajis ah laakiin qurux badan waxay u adeegi karaan sida beerta ubaxa qurxinta.